Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo gaaray magaalada Garowe | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo gaaray magaalada Garowe
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa gaaray magaalada Garowe oo lagu wado inuu ka qeybgalo aaska Madaxweynihii hore ee Puntland allaha u naxariistee Maxamed Cabdi Xaashi oo goor dhow lagu aasayo magaalada Garowe ee gobolka Nugaal.
Wafdiga uu horkacayo guddoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Sidoo kale waxaa soo dhoweynta ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Golaha Wikiillada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labada Guddoomiye Ku-xigeen ee Baarlamaanka Puntland, masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dowladda, saraakiil ciidan iyo masuuliyiin kale.
Aaska Madaxweynihii hore ee Puntland marna ahaa Madaxweyne ku xigeenka Puntlnad Maxamed Cabdi Xaashi ayaa waxaa ka qeybgalaya madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana suurtogal inay uu guddoomiyaha aqalka sare uu la kulmo madaxda dowlad goboleedyada.
Previous articleSawirro: Qoor-Qoor oo faah faahiyey wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb
Next articleNin Soomaali ah oo weerar dhimasho sababay ka gaystay Norway